Jaakada daboolida / SH-1016
Qalab: Calaamadda Silicon, Elastic binding, Piping cord, Plastic Zipper Faahfaahin: Dhammaan daabacaadda Jawiga qabow awgood, dad badan ayaa doorta dhar dhaadheer oo suuf ah. Runtii waa dareemo cufan in la xidho dhar qaab dheer leh, laakiin xulashada dharka qaabka gaaban kuma filna in lagu diiriyo. Marka midka ugu habboon waa inuu noqdaa suufka suufka lagu duubay. Naqshadeynta jaakadani ma aha oo kaliya moodada iyo quruxda, laakiin sidoo kale waxay ku habboon tahay waxqabadyada. Sidoo kale waa doorashada dad badan Noocan oo kale ah ho ...
Hoodie iyo surwaal caadi ah / SH-978
Qalabka: Hood drawcord, Herringbone tape, Silcon label, Nylon zipper Faalooyin: Dhamaan daabacaadda daabacan & guddi tolmo wanaagsan Suufka daboolka waa nooc ka mid ah dhar isku dhafan oo leh irbado fidsan iyo dun lagu daray. Dharkeeda waa laastik, iftiin iyo jilicsan, raaxo leh in la xidho. Waxay leedahay nuugid qoyaan dhakhso leh iyo marin habeyn, waana qalalan tahay oo ma dheg dheg, waa mid ka mid ah dharka ay dad badani jecel yihiin. Isku darka midabka buluugga madow iyo midabka casaanka ah waxay dadka siinayaan saameyn muuqaal oo xoog leh, taas oo muujineysa in pe ...
Dhar-dabaylaha moodada / SH-920
Qalab: Cajalad laastik ah, jiinyeer caag ah Faallooyin: Daabacaad milicsi ah, Daloolka leyska ee sanduuqa hore Dabaysha dabayshu waxay leedahay taariikh ka badan boqol sano horeyba, haddana waxay umuuqataa inay adkeysan karto waqtiga. Noocyadiisa iyo dharkeeduba waxay leeyihiin astaamo u gaar ah, oo ka tagi kara aragti qoto dheer oo muuqaal ah; wax qabadkeedu waa mid aan horay loo arag, xilliga qabowga iyo lama filaanka ah ee xilliga qaboobaha, dabaysha dabaylaha ah ayaa la gashan karaa lagana qaadi karaa markay doontaba iyadoon loo eegin cimilada, way kula socon kartaa safarka fog ee awa ...
Dharka T-Shirt / SX-2262
Suufka suufku waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loo tolo dhammaan dharka cudbiga. Dharkani wuxuu si joogto ah u sawiray isla markaana u aruuray xargaha si uu u sameeyo saamayn u eg ubax sida. Isbeddellada ka imanaya dharka linenka dabiiciga ahi waxay leeyihiin neefsasho fiican iyo nuugista dhididka marka loo eego dharka caadiga ah ee cudbida cudbida. Waa xulasho wanaagsan funaanadaha xagaaga. Suufka suufku wuxuu leeyahay astaamo aan laga heli karin dharka suufka caadiga ah, sida jilicsanaanta, hawo sarreysa hawada, iska caabin fidsan, iyo ...
Shirt Polo Casual / BL-201
T-shirt Polo waxaa markii hore xirnaa niman sharaf leh markii ay ciyaarayeen polo. Waxaa laga yaabaa in raaxadeeda darteed, ay had iyo jeer ku raaxeysato qayb sare oo ka mid ah dharka dharka. Sababtoo ah ma ahan wax iska caadi ah sida funaanad aan xiraneyn ama adag oo culus sida maaliyada, waxay aad ugu habboon tahay munaasabadaha madadaalada ganacsiga. In kasta oo qaabka funaanad Polo aanu waxbadan iska beddelin tan iyo markii ay dhalatay, haddana midabada dhalaalaya iyo xijaabka wanaagsan ee dharka leh ee dharka leh ayaa kor u qaadaya muuqaalka guud. Qaabkan annaga ...
Feerka leysarka wiilka iyo jaakad kululeysa / DK-005
Faahfaahin: Feerka leysarka ee wiilka
Qaabka Maya. DK-005
Waxyaabaha Dharka: 100% polyester dhar tolmo wanaagsan
Shuruudaha lacag bixinta: T / T, L / C
Surwaalka dheer ee wiilka SH-1058
Qaabka Maya tuubooyin on cut hoose & guddi loox
Surwaalka dhaadheer ee wiilka SH-1057
Surwaalka dheer ee wiilka SH-1056
Surwaalka dhaadheer ee wiilka SH-1055
Surwaalka dheer ee wiilka SH-960
Qaabka Maya dhinaca cut & sewn guddi
Surwaalka dhaadheer ee wiilka SH-955